မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် (၁၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်
(၁၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှု လျော့ချရေး ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ (၂)ရက်မှ (၆)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ (၆.၁၀. ၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် (၁၀)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေးနှင့် တတိယ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာတင်ထွဋ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် “Rural Transformation: Enhancing Human Capital towardsaresilient Rural Community” ခေါင်းစဉ်အပေါ် အာဆီယံနိုင်ငံအလိုက်မှ အတွေ့အကြုံများ မျှဝေဖလှယ် ခဲ့ကြပြီး Resilient Rural Community နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံများအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာတင်ထွဋ်မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းဆု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်(၁၀)နိုင်ငံမှ အဆိုပြုတင်ပြသည့် NGOs/CSOs (၁၀)ဖွဲ့နှင့် Private Sectors(၁၀)ဖွဲ့တို့အား အာဆီယံဝန်ကြီးများမှ ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ NGOကိုယ်စားပြု ဆုအတွက် Social Vision Services အဖွဲ့နှင့် Private Sector ကိုယ်စားပြုဆုအတွက် Myanma Awba Group Co.,Ltd. တို့မှ ဆုများ အသီးသီး လက်ခံရယူခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အလားတူ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်မှ (၅)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး၊ (၁၀)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ+၃နိုင်ငံများ၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် (၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဖိုရမ်သို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော် ဦးဆောင်၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အာဆီယံကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှု လျော့ချရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်မူဘောင်(၂၀၁၆-၂၀၂၀)ပါ သက်ဆိုင်ရာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအလိုက်မှ Country Coordinators များအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအလိုက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်၍ အတွေ့အကြုံများ မျှဝေဖလှယ်ခဲ့ပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။